MINISTERAN’NY FITORIANA NY VAOVAO MAHAFALY - Fihavaozana Karismatika katôlika fiombonana
Home »MINISTERAN’NY FITORIANA NY VAOVAO MAHAFALY
Ny asam-panirahana ny tsirairay sy ny asa apostola karismatika ao anatin’ny fiainantsika dia manentana sy mitarika antsika harisika hiaina ny Tenin’Andriamanitra, dia ny Evanjely izany. Ho an’ny Ministeran’ny Fitoriana ny Vaovao Mahafaly àry, dia tovozintsika sy hita taratra mazava ao amin’ny Evanjelin’i Md Matio 16, 15 sy ny sisa : « Mandehana amin’izao tontolo izao, ataovy mpianatro ny firenena rehetra… »
Marina sy tsy azo lavina fa ny maha kristianina dia mifototra amin’ny adidy sy andraikitra amin’ny maha irak’i Kristy, amin’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly. Noho izany, mba ho tena kristianina matotra, dia tsy maintsy maka tahaka an’i Kristy Tompo « mitety an’izao tontolo izao » mba hahita mpianatra vaovao ho mpandova ny Fanjakan’Andriamanitra. «Ataovy tonga mpianatro ny firenena rehetra… » izany dia midika hoe lazao sy hampahafantaro azy ireo ny fahazavan’ny Vaovao Mahafaly mba hitarika sy hanentana azy ireo hifantoka amin’i Kristy izay loharano tokan’ny Famonjena.
Noho izany, tsy tokony hotanantsika ho antsika samy irery ny tsiambaratelon’ny Famonjena, ny mifanohitra amin’izany aza no tokony hatao, satria fanamby lehibe ho antsika ny mampahalala amin’ ny olon-drehetra ny Vaovao Mahafaly, araka ny tokony ho izy amin’ny alalan’ny herintsika manontolo sy ny fomba mahomby samihafa. Noho izany, ny ivon’ny andraikitra maha kristianina, indrindra ho an’ny karismatika dia ny asam-pamonjena ho an’ny olon-drehetra. Ary azo lazaina fa ny famonjentsika ny tenantsika dia mifampiankina amin’ny asam-pamonjena ataontsika ho an’ny hafa.
Tamin’ny andro nandraisantsika ny « hafenoan’ny Fanahy Masina » dia nanaiky isika fa vonona hizara ny fahasoavana sy ny fanomezam-pahasoavana amin’ny hafa, satria voatokana sy voaantso ho fanatitra sy tolotra lehibe ho an’i Jesoa Tompo sy Mpamonjy isika, mba ho iraka hitondra ny Vaovao Mahafaly eo anivon’ny Fiangonana ka hanamasina sy hanavao azy, izay mariky ny famonjena lehibe ho an’izao tontolo izao. Mazava ho azy izany fa ny mpikambana rehetra ao amin’ny vondrom-bavaka karismatika, araka ny maha izy azy, dia tokony hanana ny toetra maha iraka ary vonona mandrakariva hitondra ny anjara birikiny amin’ny famonjena an’izao tontolo izao :
na amin’ny alalan’ny vavaka mivantana,
na amin’ny alalan’ny fitoriana mivantana,
na amin’ny fampitaovana ilaina ho entina mitory,
na amin’ny fijoroana ho vavolombelona eo amin’ny fiainana an-davanandro,
na amin’ny fitondran-tena mendrika.
Ohatra ho antsika i Md Paoly nanao hoe : « Loza ho ahy raha tsy mitory ny Evanjely aho… ». Tsarovy mandrakariva fa ny Fihavaozana karismatika dia teraka tamin’ny alalan’ny fanetren-tena sy ny fitiavan’ny Fanahy Masina MBA HITORY NY VAOVAO MAHAFALY !!! Ka ny hoe mitory ny Vaovao Mahafaly dia midika hoe :
mampahafantatra an’Andriamanitra sy ny fahamarinana ao aminy,
mamantatra ny tsiambaratelon’ny famonjena,
mamantatra ny tsiambaratelon’ny finoana,
mampafantatra ny sitrapon’Andriamanitra sy ny fiainana ao aminy…
Ny mikasika ity asam-pitoriana ity izany, dia azo fantarina fa ilain’Andriamanitra ny olona. Tena zava-dalina tokoa izany satria mampanontany tena manao hoe : Nahoana Izy Andriamanitra no misahirana manompo ny olombelona ary dia amin’ny fomba tsotra sy voafaritra mazava, dia amin’ny alalan’ ny Vaovao Mahafaly. Araka ny voalazan’i Md Paoly dia amin’ny alalan’ny adalàn’ny Evanjely no hamonjeny izao tontolo izao. Zava-dehibe sady manandanja tokoa ity ministera ity ho antsika mpikambana karismatika. Izany indrindra no mahatonga ahy hifampizara sy hamelabelatra misimisy kokoa aminareo ity ministera ity.
Araka ny teolojian’ny Fiangonana, ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly dia lalana maro sy misampatsampana nefa mifameno, izany hoe : misy fomba maro ahafahana mitondra ny hafatr’i Kristy nefa ilaina ihany ny manavaka azy ireny. Voalohany, ny fitoriana dia foronin’ny singan’asa maromaro izay sahanin’i Kristy sy ny Fiangonana. Noho izany, ny asa fitoriana rehetra ataon’ny Fiangonana dia midika ho fampianarana sy ho fankalazana ny fiainana ny ministeran’ny famonjena.
Araka ny tokony ho izy ary, mitsinjara amin’ny endrika samy hafa toy izao ny Fitoriana ny Vaovao Mahafaly :
Endrika maha-mpaminany : ny teny toriana (fitoriana tena izy ny Vaovao Mahafaly),
Endrika maha-mpisorona : ny teny hankalazaina (litorjia, fahatsiarovana ny asam-pamonjena),
Endrika maha-mpanjaka : ny teny iainana (fanorenana ny Fanjakan’Andriamanitra eto an-tany).
Ny fitoriana amin’ny maha-mpaminany dia manambara ny asam-pamonjena nataon’i Jesoa tamin’ny alalan’ny teny mahomby sy ny oha-piainana.
Ka amin’ny alalan’ny fitoriana, dia tokony ho hita taratra ny fomba roa miavaka tsara samy manana ny maha izy azy avy, nefa koa mifameno dia ireto avy izy ireo :
KERIGMA: fitoriana voalohany ny Vaovao Mahafaly amin-kery,
KATESIZY: fampianarana manara-penitra ny finoana sy ny fiofanana maharitra ny finoana.
Ireo no zavatra roa lehibe ao anatin’ny Fitoriana ny Vaovao Mahafaly. Raha horaisintsika ho toy ny lakolosy manaitra sy manentana ny Kerigma, dia ny katesizy no feo miely amin’ny toerana sy ny fotoana. Noho izany ny katesizy, dia fampielezana ny kerigma. Ny katesizy izany dia tsy midika ho fampianarana mangatsiaka na teolojika, fa fampandrosoana sy hafenoan’ny fiainam-baovao atolotra amin’ny alalan’i Kristy. Amin’ny alalan’ny finoana, dia nomen’i Kristy ho antsika ny fiainany, izay valin’ny fitoriana ny fahasoavana.
Ny fiainantsika tanteraka ny katesizy ao anatin’ny finoana no mampamokatra sy mampavokatra ny fiainantsika. Ny katesizy dia tsy midika hoe kerigma na misolo toerana azy, fa manampy azy kosa. Miorina eo ambony vatolampin’ny kerigma ny katesizy. Ary ny tanjon’ny kerigma dia mitarika fahaterahana vaovao indray ao anatin’ny finoana. Ny fiainana maha kristianina dia manomboka amin’ny fihaonana manokana sy velona miaraka amin’i Kristy. Io fiainana io dia tanteraka sy mitohy amin’ny alalan’ny finoana. Noho izany raha tsy misy io fototra kerigmatika io, dia foana ny dingana sasany ao amin’ny fitoriana toy ny katesizy izay misy ny teolojia, ny moraly, ny fampianarana momban’ny litorjia na karazana fampianarana sasany apostolika na sosialy, dia ho toy ny trano miorina eo ambony tora-pasika…
XXXXXXXXXXXXXXXXXX KERIGMA KETESIZY
ARAKA NY TENY Mitory, miantsoantso Miambina, manangona
MPIKATROKA Fahaterahana vaovao, manana ny fiainana Fivelarana ao amin’i Kristy, manana fiainana mamoa be
VONTOATINY JESOA :
maty – MPAMONJY
nitsangana – TOMPO
nomem-boninahitra-MESIA Fampianaran’ny finoana, Moraly, fotom-pinoana, Baiboly etc.
FOMBA FIASA Fitoriana an’i Jesoa : Amin’ny alalan’ny Vaovao Mahafaly, miantefa indrindra amin’ny sitrapon’ny olona arahina ny oha-piainana Fampianarana ara-potoana sy mamokatra, miantefa indrindra amin’ny fahaizan’ny olona mba hafantarany sy andalinany ny Finoan’ny Fiangonana
IZAY MIASA Mpitory ny Vaovao Mahafaly : vavolombelona feno ny Fanahy Masina Katesista : mpampianatra, mpanofana feno ny Fanahy Masina
TANJONA Fihaonana manokana amin’i Jesoa amin’ny alalan’ny finoana sy ny fibebahana. Fitoriana an’i Jesoa ho Mpamonjy. Fihaonana amin’ny Vatan’i Jesoa Kristy : ny mpikambana, ny Fahamasinan’ny Vahoakan’Andriamanitra
VALINY Famalian’ny tsirairay :
Mpamonjiko Tompoko Mesiako Famaliana miaraka :
Mpamonjitsika Tompontsika Mesiantsika
FOTOANA Anio Manomboka ankehitriny
Manangana ampahana apostola iray isika, dia ny ministeran’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly izany. Ary arak’io fizarana fototra io, ny fitoriana amin’ny maha-mpaminany io, izay ao amin’ny kerigma sy ny katesizy, dia tsapako fa zava-dehibe ny mamorona sampana maro izay mifampiankina ao anatin’izany ministera izany. Noho izany ao anatin’ny Fiombonana, ny ministeran’ny Fitoriana dia azo tsinjaraina toy izao :
1-Sampana kerigmatika : Izay tompon’andraikitra ny apostolan’ny fitoriana « AD-Extra », izany hoe mitarika sy manentana ireo izay hiroso ho mpikambana vaovao ka hateraka indray amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina, ka ho tonga mpianatr’i Kristy ary tena vonona handray andraikitra tokoa. Izany dia misy mandrak’ankehitriny amin’ny alalan’ny fihatahana masina izay fanao mahazatra, izay mifototra amin’ny hafatry ny kerigma. Izany hoe ilay fihatahana masina fanao ho an’ny zandry. Ary koa amin’ny alalan’ny andro voatokana hoan’ny karismatika any amin’ny Paroasy na any amin’ny ankohonana samihafa any.
2-Sampana katesetika (Fiofanana) : Izay tompon’andraikitra ny apostolan’ny fitoriana « AD-Intra », izay ao anatin’ny vondrona amin’ny alalan’ny fanofanana ny Zoky, amin’ny fitantanana azy ireo mba hanana fiainana feno ao amin’ny Fanahy Masina. Izany hoe ny fiofanana maharitra rehetra homena ny mpikambana rehetra ao amin’ny Fikambanantsika, toy ny fampianarana isan-karazany amin’ny kongresy sy ny sisa. Ary araka ny efa nambara, dia ity sampana ity dia manome antsika harena sarobidy ao amin’ny finoantsika :
* Toy ny fitsipi-piainana ara-panahy amin’ny ankapobeny,
* Toy ny tantaram-pamonjena,
* Toy ny tantaran’ny Fiangonana,
* Toy ny lovantsofin’ny Fiangonana,
* Toy ny Tenin’Andriamanitra, ny Baiboly izay vakiana amin’ny lovantsofin’ny apostoly,
* Toy ny teolojia fototra sy moraly,
* Toy ny litorjia,
* Toy ny lalan’ny Fiangonana, izany rehetra izany dia manampy antsika « hiroso amin’ny lalina » ao amin’ny fianantsika sy asa nanirahana antsika amin’ny maha-karismatika antsika.
Noho izany araka ny filan’ny tsirairay sy ny gropy izay niantso antsika, dia voairaka hitory isika, na amin’ny alalan’ny kerigma na amin’ny alalan’ny fampianarana ny katesizy (ara-teolojika, ara-panahy, ara-moraly…).
Ary amin’ny alalan’ity sampana ity, dia tsy maintsy mamorona ekipa mpitory manana fanomezana manokana sy manana karisma isika. Amin’ny manaraka dia mbola hohalalinintsika izany.
Ny fandraisana andraikitra amin’ity ministera ity dia midika ho fandraisana andraikitra amin’ny ady amin’ny fampanjakana ny marina. Iza no fahamarinana ? Inona no fahamarinana ? Mamaly antsika i Jesoa manao hoe : « Izaho no lalana, fiainana ary fahamarinana… » hitantsika izany ao amin’ny Baiboly. Izany dia manampy ny olona hamantatra ny hetahetany, ny metimety kokoa amin’ny fiainany sy ny lalan-kizorany, ny antson’Andriamanitra miantefa ao aminy sy ny hevitr’Andriamanitra momba ny olombelona. Izany no adidintsika.
Ao anatin’ity Ministera ity, dia maka tahaka an’i Jesoa Mpampianatra isika. Izy izay tonga amin’izao tontolo izao nanazava ny fiainantsika tamin’ny alalan’ny Evanjely. « Kristy Jesoa dia nandrava ny fahafatesana ary nampamirapiratra ny fiainana sy ny tsy fahafatesana tamin’ny Evanjely » (2 Tim 1, 10). Ary mazava ho azy fa izay mitory ny Tenin’Andriamanitra dia tokony ho VAVOLOMBELONA miaina ny Teny Izay notoriany. Voaantso izy ireo ho Famantarana an’i Kristy Velona eo anivontsika. Izany hoe antsoina ho Kristy faharoa… Evanjely mandehandeha !!! Araka izany, ny ekipa ao amin’ny Ministera dia miezaka hahafantatra lalina ny fahamarinana, ary vokatr’izany dia mampanjaka tanteraka ny fahamarinana.
Ny mpikambana hafa ao anatin’ny vondrona kosa dia tokony mandray azy ireo ho fitaratra amin’ny alalan’ny fiainana lavorary ao amin’ny Fanahy Masina… ary tokony hikatsaka mandrakariva ny fahamasinana, fahazavana sy fitiavana…
Ny fomba fitoriana amin’ny alalan’ny TENY dia miankina amin’ny antso izay renesintsika. Izany dia :
Ny sokajin’olona araka ny taonany :
Ny sokajin’olona araka ny kilasiny, ny farim-piainany, ny foko sns.
Ny sokajin’olona araka ny farim-pahaizany sns.
Ny sokajin’olona araka ny andraikiny sy fahalalany ny finoana :
Tsy vita Batemy,
Ireo efa andalam-piofanana amin’ny batemy,
Vita Batemy fa tsy mazoto mivavaka,
Ireo malaindaina ara-pinoana,
Araka ny efa nambara dia tokony hahay hamantatra ny filan’ny olona isika araka ny olana mianjady aminy mba hahafahana mitory ny Vaovao Mahafaly mifanaraka amin’ny toetr’andro.
Amin’ny alalan’ity Ministera ity no hahafahantsika miara-miasa akaiky amin’ny Aomonie mba hanana Fijery voadinika sy voasaintsaina tsara ao amin’ny asa sy ny andraikitra rehetra maro loha ato anatin’ny fihavaozana karismatika « FIOMBONANA ». Ny fijery marina sy tsy mitongilana dia hery lehibe ho an’ny asa sady manampy eo amin’ny fampiharana.
Ny fijery ankehitriny ao amin’ny fihavaozana, izay sady fijery fototra ho an’ny fotoana ho avy, dia ny FIOMBONANA sy ny FITORIANA NY VAOVAO MAHAFALY.
Araka izay heverintsika ao anatin’ireo sehatra roa ireo, dia tokony hifanofana sy hifampizara isika mba ho fitaovana mahombin’ny Fanahy Masina ao anatin’ny Fiangonana eto Madagasikara. Ny mpikambana ao amin’ny Ministeran’ny Fitoriana ny Vaovao Mahafaly, indrindra ny ao amin’ny sampana katesizy, ireo no mpamolavola ny paik’ady. Marihina anefa fa tsy ireo mpikaroka ara-teolojika na ny fampianarana avo lentan’ny Fiangonana loatra izany. Ny karismatika mpiandraikitra ato amin’ity Ministera ity dia tokony ho Mpampianatra no sady Vavolombelona. Ny sasany izay mandray anjara amin’ny fiainana maha-karismatika dia manana traikefa omban’ny fanomezana manokana ka mivavaka amin-kafanam-po. Izy ireo no manoritsoritra ny lalana sy manazava ny fiainana maha-karismatika, ny fiainam-bavaka sy mivelona ny sori-dalana maha-karismatika mba tsy hivily lalan-kafa. Noho izany, tompon’andraikitra izy ireo ka tokony HO MAILO sy HAHAY HANDANJALANJA tsara. Ny lalana ara-panahy dia sarobidy sady marefo ka mila fitandremana tsara. Ka noho izany, azo lazaina fa ny firosoana ara-panahy eo ambany fanilovan’ny Fanahy dia misy mandrakariva ny fitaka sy ny asa ratsin’ny Demony izay tsy mitsaha-mitombo.
Noho izany ireo rahalahy sy anabavy izay te hirotsaka ho mpikatroka ao anatin’ity Ministera ity dia tokony ho vonona mandrakariva hikaroka ny fomba mahomby sy fahalalana hahafahany miatrika izany ao amin’ny fiainan’ny Fiangonana. Anisan’izany ny fiainam-bavaka sy ny fahalalana ny fampianaran’ny Fiangonana. Ary tokony tsy ho adino ny vatsim-panahy izay manazava sy mitarika antsika hiroso amin’ny asa apostola sy ny fiainana maha karismatika tsy misy fetra : « Ao amin’ny fon’ny Fiangonana ».
Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika fa ankehitriny efa misy lahika vitsivitsy vonona mandalina izany adidy lehibe izany ary miezaka ho matianina ao amin’ny filankevitra nasionaly manerana ny Nosy. Tsy vitan’izany ihany koa fa efa miezaka ihany koa ny any amin’ny gropy tsirairay. Rariny sy hitsiny ireo vondrom-bavaka raha mitondra ny anjara birikiny izay aseho amin’ny alalan’ny vavaka fiderana sy fifampizarana ny Tenin’Andriamanitra isan-kerinandro. Ary manantontosa izany izy ireo ao anatin’ny 10-15 minitra ka miezaka mandalina sy mampianatra izay zavatra maika hanatsarana ny gropy tsirairay mba hahafahana miroso misimisy kokoa amin’ny fandaminana samihafa. Ny hery mamelona antsika mantsy dia ny vavaka. Entanina izany ny isaky ny gropy hiaina ny fampianaran’ny finoana, ka ny voalohany amin’izany dia ny fampianaran’ny katesizy. Ary ao anatin’io fototry ny katesizy io no hifanakalozantsika hevitra, hiadiantsika hevitra ary hanazavana ny misterin’ny Finoana.
Haveriko indray fa ao anatin’io Ministera io no tokony hahafahantsika mahita izay vonona handray andraikitra amin’ny sampana kerigmatika (mba hitarika matsom-panahy fanaon’ny karismatika hatrizay) ary izay vonona handray andraikitra ao amin’ny sampana katesetika. Hiaraha-mahalala fa nisedra olana lehibe isika teo aloha tamin’ny fotoana nitadiavana Mpisorona hiandraikitra ny Fihavaozana ary sarotra ho azy ireo no nanaraka ny lojikan’ny fiainana ara-panahintsika karismatika. Noho izany, mila lahika vonona sy afaka hiandraikitra ny fampianarana karismatika tena izy isika. Ny hafatra fototra sy voalohan’ny Fihavaozana dia efa manomboka velona sy mahazo toerana tsara, tsy inona izany fa ny KERIGMA. Ny hany sisa tavela hatao sy himasoana dia ny ivo tampon’ny Kerigma. Noho izany, tokony ho tena matianina amin’ny kerigma isika, dia ny kerigma toriana sy hampianarina sy ny kerigma hiainana.
Mivonona sy mandraisa fampianarana mandrakariva mba ho tonga sy ho lasa manana fahaiza-manao tena izy manoloana ny andraikitra sy asam-panompoana ataontsika eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina, mba ho famonjena ny fanahy maro.